Ihe mere anyị ji hụ ezigbo matra anya matraasi mmiri
Nke a bụ nnọọ ụdị Amazon (NASDAQ: Amzn) / nri niile (WFM). Yongui malitere imekọ ihe na Jingdong na mbido 2016. Dị ka taa, Yongui nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 80, na-enye ndị ahịa ohere itinye ego n'ụlọ ma chere maka nnyefe n'ụlọ. Yongui na Jingdong nwere ezigbo ndị ahịa dị iche na mpaghara na-ere ahịa dị iche iche; Data anakọtara site na Yongui bụ mgbakwunye na ọnọdụ Jingdong dị ugbu a, nke nwere ike inyere JingDong aka weghara onyinyo nke ndị na-anaghị azụ ahịa n'ịntanetị ma kwadebe maka mmụba ọzọ.
Nkwụsi ike, ike na elu ogo nke ndị ọrụ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ dị ala. \_ "Ọ siri ike karịa uru ị nwetara, \_" Wilson kwuru. \_ ". Merillat hụrụ Richard Cruer nke ụlọ ọrụ Mirard Cruer. O kwuru na ụlọ ọrụ na-emepụta ụlọ ọrụ
Kwụpụ 3: Anyị enyochala site na site na igwe nke anaghị egosi ọrụ ọ bụla nke Cortal Corporation iji lekọta Strata Lọt. Site na nke a, anyị nwere ike ikwubi na onye nwe obodo ahụ bụ maka nkwalite nkwalite nke ọkpọ / eriri mmiri dị na strata Lọt. Ma buru nzọụkwụ wee jụọ: \_ "Gịnị bụ ihe kacha mma maka ndị niile nwere?